Topimason’ny Fibodoana Azia Atsimo Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2011 12:26 GMT
Miely manerana an'i Azia Atsimo Atsinanana ny Hetsika ‘Fibodoana’ (na Fananihana). Aingam-panahy avy amin'ny Hetsika ‘Fibodoana’ manerantany no nisian'ny fivoriana tany Malezia, Indonezia, Filipina ary Singapore tamin'ity volana ity.
Navitrika tamin'ny fampiasana ny valan-tserasera (media sosialy) ny mpanomana mba himpàka any amin'ny vahoaka ny hetsika nomanin-dry zareo. Bodoy Dataran any Kuala Lumpur, Malezia mikendry hitrandraka ny tena dikan'ny demokrasia:
Cindi Loo mitantara ny zava-nitranga izay niainana tao amin'ny OccupyDataran:
Niteraka aingam-panahy tamin'ny mpikatroka tany Penang, Malezia, hanomanany ny Hetsika ‘Fibodoana’ ho azy manokana ihany koa ny katroka tao Dataran:
Mandritra izany fotoana izany dia notontosaina teo anoloan'ny Tsenam-bola ihany koa ny Fibodoana an'i Jakarta any Indonezia. Eto ambany ny lahatsary fohy ny iray amin'izany fivoriana izany:
‘Occupy’ Nokarakaraina tany Mendiola (manakaiky ny lapam-panjakana) , Cagayan de Oro, Makati, ary ny Ambasadin'i Etazonia Amerika any Filipina ny Hetsika ‘Fibodoana’. Niaraka tamin'ny fivorian'ny tantsaka madinika izay mitaky ny hanavaozana ny fizakan-tany ao amin'ny firenena ny katroka.
Kapirasong Kritika [fil] mieritreritra fa tokony any amin'ny faritra azon'ny olona idirana no hanaovana ny hetsika ‘Fibodoana’ :
Ny Global Voices moa dia efa namoaka lahatsoratra momba ny tsy nisy tonga tamin'ny Hetsika Bodoy i Singapore.